Xiriirinta Dhismaha Farshaxanka
Twin Cities Telefishinka Dadweynaha (TPT) waxay ku xiran tahay farshaxanada Minnesota ee leh dhagaystayaasha iyadoo loo marayo MN Original, oo ah abaalmarinta abaalmarinta abaalmarinta toddobaadlaha ah ee dabaaldega bulshada ee Minnesota, dhammaan noocyada dhaqanka iyo dhaqamada oo dhan. Hada sannadkii siddeedaad, MN Original wuxuu soo bandhigay in ka badan 4,000 farshaxan oo Minnesota ah tan iyo markii la aasaasay. Munaasabadda oo dhan oo laga helo Minnesota iyo Xarumaha PBS ee dalka oo idil, MN Asal ahaan waxay kordhisaa wacyigelinta fannaaniinta farshaxanada iyo fanka fanka, waxay dhiirrigelisaa dadka daawanaya inay ka fekeraan farshaxanka iyo fannaaniinta siyaabo cusub waxayna kobciyaan dhagaystayaasha cusub ee farshaxanka iyaga oo kor u qaadaya faham qoto dheer oo geedi socodka hal abuurka ah .
Sanadka 2015, TPT waxay soo bandhigtay fanaaniinta maalinlaha ah, MN Original's oo kaliya oo loogu talagalay inay dhagaystayaashu bartilmaameed cusub geliso barnaamijka farshaxanka iyo dhaqanka TPT. Muhiimadda iyo saameynta Barnaamijka farshaxanka ee TPT ayaa si cad u muujinaya tusaalaha Emily Lynch Victory, oo ah riwaayad lagu soo bandhigay Maalinta Maaliyadeed ee Sanatinta.
77% ka mid ah farshaxanada ayaa lagu soo bandhigay farshaxanka TPT ee farshaxanka iyo barnaamijyada dhaqanka ayaa sheegay inay kor u qaadayaan wacyiga iyo xiisaha ay u hayaan shaqadooda.
Sida Emily uu qoray, "Maalinta Sanatinta Maaliyeyaashu way isbeddeshay noloshayda. Xaqiiqda. "Waxay tiri, ka hor inta aan barnaamijka lagu soo bandhigin, waxaa la aqbalay mid ka mid ah tobankii tobnaad ee muujiyay inay codsatay, inta badanna waxay ahayd in ay muujiso hawsheeda goobaha aan rasmiga ahayn. Laakiin Maalinta Sanatinta Maaliyadu waxay keeneen muuqaal iyo aragti xaddidan. Dhacdadeeda waxaa la arkay in ka badan 382,000 oo qof online ah oo ay wadaagaan 2,200 jeer. Wax yar ka dib, marti-gelinta ayaa ka soo baxday jaamacadaha, shirarka qaranka, xitaa xarunta Horseedka Farshaxanka. Emily wuxuu ku sii faahfaahiyay in kaqaybqaadashadeeda isbedel shakhsi ahaaneed, sidoo kale: "Tilmaame-kan ugu muhiimsan-wuxuu iga dhigay inaan rumaysto naftayda." Waxay kalsooni ku qabtaa awooddeeda, iyo booskeedii sida rinji. Ugu dambeyn, Emily wuxuu ku qoray, "Anigu waxaan rumeeysanahay shaqeeye shaqeynaya shaqo dheeraad ah. Anigu waxaan aad u shaqeynayey ka hor intaan la sii daayay fiidiyoow-laakiin shaqadeyda adagi ma aysan dhicin dad badan oo sax ah. Taasi daroogada 5 daqiiqo ah ... waxa ay shaqadayda u siisay dadka daryeeshay waxyaabaha ay ka kooban tahay. Oo haatan shuqulkaygu waa farxad miidhan. Waxay igu leedahay rinjiyeynta iyo abuurista ... iyo dhiirigelinta iyo kobcinta iyo ka shaqeynta badan adag. "
Kiiska Emily maahan tusaale tusaala ah. Xaqiiqdii, 77% oo farshaxanayaal ah ayaa lagu soo bandhigay farshaxanka TPT iyo barnaamijyada dhaqameedu waxay sheegeen inay kor u qaadayaan wacyigelinta iyo xiisaha ay u hayaan shaqadooda. Falanqaynta fannaaniinta waxay u dhigmaan in ka badan $ 500,000 oo ah boodhadh cusub oo muuqaalkooda muuqaalkooda MN Original ama TPT ee taxanaha 'The Lowertown Line'. Waxaa intaa dheer, sahan dhawaan la sameeyay oo muujiyay in fannaaniinta farshaxanka muuqaalkooda ku jira MN Original ay si toos ah u dhigeen $ 143,000 oo ah iibinta shaqadooda si ay ugu muuqdaan barnaamijka. Intaa waxaa dheer, 31% sawir-qaadayaasha farshaxanka ah ee la daraaseeyay ayaa soo sheegay in kororka laga yaabo in ay iibsadaan shaqadooda.
MN Asalka ayaa waxaa suurta galiya Fanka Fanka iyo Dhaqanka Gobolka iyo muwaadiniinta Minnesota. Deeqda hawlgalka ee ka socota McKnight Foundation waxay taageertaa naqshadeynta guud ee farshaxanka TPT iyo xor ah oo caalami ah si loo helo fursado dhaqameed kala duwan oo loogu talagalay dadka da 'walba iyo dhammaan qaybaha nolosha. Thanks to hadiyadahaas, TPT waxay kobcisaa dhaqaalaha hal-abuurka ah waxayna dhisaan bulshooyin firfircoon oo isku xiran.